#Hogaamiyaha Shiicada Nigeria Iyo xaaskiisa ayaa diiday In lagu daweeyo India, kuna laabtey dalkooda
Ibrahim El-Zakzaky iyo afadiisa ayaa waxaa qabilay howl wadeeno dhinaca amniga ah oo ku sugan garoonka magaalada Abuja dibna xabsiga ugu celiyayey.
By Caalamka On Aug 16, 2019 Last updated Aug 16, 2019
Hogaamiyaha Shiicada Nigeria Ibrahim el-Zakzaky iyo xaaskiisa ayaa dalkooda dib ugu laabtay, seddex maalmood ka dib markii ay yimaadeen India si ay u helaan daweyn caafimaad, sida ay sheegeen saraakiisha duulista Nigeria iyo qareenkiisa.
Hoggaamiyaha la xiray ee dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Nigeria (IMN) iyo Zeenat Ibrahim ayaa Jimcihii ka soo degay gegada diyaaradaha caalamiga ah ee Abuja iyaga oo ka soo raacay New Delhi diyaarad Ethiopian Airlines ah, sida ay sheegeen taageerayaasha iyo qareennadooda.
Waxaa soo dhoweeyey hawl wadeenada amniga ka tirsan oo dib ayaa loogu celiyay xabsiga.
“Waxa uu kujiraa xabsiga nabadsugida gobolka cidna looma ogolaado in ay uu gasho,” Mahdi Garba, oo ah taageere El-Zakzaky ayaa u sheegay sidaas Al Jazeera.
Lamaanaha la xiray ayaa dalka ka dhoofay maalintii Isniinta kadib markii maxkamad ku taal waqooyiga gobolka Kaduna ay ku siideysay damiin si ay u raadsadaan daaweyn dibedda.
El-Zakzaky ayaa lagu soo waramayaa inuu diiday in daabiib lagu sameeyo cisbitaal Hindi ah markii kooxdii uu doorbiday ee caafimaadka la beddelay kadibna waxaa uu codsaday in dib loogu celiyo Nigeria .
Muuqaal fiidiyow ah oo lagu faafiyay warbaahinta bulshadda, hogaamiyaha muranka dhaliyay ee IMN wuxuu ka cawday sida cadaalad darrada ah iyo xayiraadaha adag ee ay saareen hawlwadeenada amniga ee loo geeyay xarunta caafimaadka in ay isaag ilaaliyaan.
“Waxa kaluntay rajada cisbitaalka ka lahaa,” qareenkiisa Harun Magashi ayaa u sheegay Al Jazeera.
“Waxaay isku dayayeen inay ku dhex dhuuntaan dhakhaatiirta qaar si ay ula dhaqmaan si ka soo horjeedda rabitaankiisa, waxayna ula dhaqmeen sidii qof dambiile ah, iyagoo boolis Hindi ah dhigay xitaa qolkiisa,” ayuu yidhi Magashi.
El-Zakzaky waxaa uu gacanta dawladda ku jiraa ilaa Diseembar 2015 markii ay ciidamadu dileen ku dhawaad ​​350 ka mid ah taageerayaashiisa oo ku sugnaa xaruntooda iyo masjid ee gobolka Kaduna.
Maxkamad ayaa sanadii 2016 sheegtay in el-Zakzaky in lasii daayo laakiin mas’uuliyiinta dalka ayaa diidey arrinka oo ku gacan seyrey.
Wuxuu wajahayaa eedeymo dil,dil sharci darro ah, carqaladayn nabada shacabka, iyo dambiyo kale ka dib qalalaasihii 2015. Isagu ma qiran dambiga.
Go’aanka maxkamadda Kaduna Kaddib, Adeeggaha Amniga ee Gobolka Nigeria ayaa markiiba ballanqaaday inay adeecaan xukunka.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, xubnaha Shiicada waxay mudaaharaadyo isdaba joog ah ka bilaabeen caasimadda, Abuja, iyo Lagos iyaga oo dalbanaya sii deynta hoggaamiyehooda iyo afadiisa si loo daaweeyo.
Dhowr qof ayaa ladilay in kabadan 50 xubnood oo katirsan kooxda IMN ayaa lagusoo qabtay iskudhac booliis oo galaftey dilka saxafiga iyo sarkaal booliis ah, iyo waliba xiritaanka dhismaha baarlamaanka ee Abuja.
Kooxda, oo matalaysa dadka laga tirada badan yahay ee Nigeria ee Shiicada ah, ayaa sheegay inay sii wadeyso mudaaharaadka illaa ay ka xaqiijinayaan sii deynta El-Zakzaky, oo aasaasay IMN dabayaaqadii 1970-meeyadii.
Dowladda Nigeria ayaa dhawaan mamnuucday kooxda Shiicada kadib go’aan maxkamadeed oo u oggolaanaya mas’uuliyiinta inay ugu yeeraan urur “argagixiso”
Xafiiska Madaxweynaha Muhammadu Buhari wuxuu sheegay in dawladdu “ay ku qasbanaatay” inay ka hortagto kooxdan ka hor inta aysan xaaladdu faraha ka bixin.